TOKYO (Reuters) - Tokyo 2020 varongi vakabata kudengenyeka kwenyika nemusi weChina kuAriake Gymnastics Center, nzvimbo ichangobva kuvakwa yemitambo yeOlimpiki yegore rinotevera, kuti vaedze kugona kwavo kana kwaitika njodzi panguva yeMitambo.
Varongi vakafungidzira mhinduro yavo kana kudengenyeka kukuru kwakakura kusvika 7.3, kwakadziva kuchamhembe kweTokyo Bay, nzvimbo yenzvimbo gumi nembiri dzeOlimpiki, kurohwa. Kunyangwe varatidziri mazana matatu chete vakapinda muchirongwa ichi, varongi vakafadzwa nekushandira pamwe pakati pemasangano akasiyana siyana.
"Kutanga, ndinofunga isu takawana dzakawanda zvezvinangwa zvedu zvekutanga kuchimba uku," akadaro director weguta, Hiroya Yarimizu. "Sechinangwa chakanyanya kukosha, takatarisa nzira iyo maOlimpiki Kuronga Dare neTokyo (Hurumende yeMetropolitan) vanogona kudyidzana."
"Mapurisa, vanodzima moto uye veDziviriro Vemasimba (SDF) vakabatana nekurovera panguva ino uye ndinofunga tese takataura zvakanaka." Mishonga, mapurisa, vanodzima moto uye nhengo dzeSDF dzakasvika paGymnastics Center sechimwe chikamu chekuriraira kuda kuteedzera vatambi vanonyepedzera. kukuvara, uye vanaamai vanomiririra vakaipisisa.
Vashandi vekununura vakabata vanhu vakati wandei panzvimbo iyi vasati vabvisa munhu wese munzvimbo iyi. Pakutanga yambiro yakapihwa muchiJapanese neechiRungu uye varongi vakati kana paine nenjodzi, zviratidzo nemutauro wechiRungu nemashandisi ekushandura zvinoshandiswa kubatsira mamiriyoni evashanyi vekunze vanotarisirwa muTokyo kuMitambo.
Japan ndeimwe yenyika dzakanyanya kushatirwa munyika kudengenyeka, typhoons uye tsunami uye kugadzirira chero dambudziko rinogona kuitika panguva yeMitambo inomiririra musoro wakakura wevakaronga.
Japan inowana avhareji yekudengenyeka kwenyika mazana mashanu, pagore, kunyangwe vashoma vanokanganisa chero kukuvadza, ingorega kurasikirwa nehupenyu. Asi kudengenyeka kweKobe muna 1995 kwakauraya vanhu vanopfuura mazana matanhatu nemazana mana uye zvakakonzera kukuvara kwemabhiriyoni zana emadhora.
Muna Kurume 2011, kudengenyeka kukuru uye tsunami zvakaparadza mahombekombe ekumabvazuva, ndokuuraya vangangosvika zviuru gumi nemasere uye zvichikonzera nyonganiso panzvimbo yeFukushima simba rekudyara.